iOS 11 inounza neSiri nyowani ine nhau uye rimwe izwi | IPhone nhau
Siri chaive chimwe chezvikamu zvikuru izvo isu taida kuona kuvandudzwa muIOS 11, Zvagara zvichitaurwa kuti mubatsiri weApple aive pasi pemakwikwi, kunyanya zvakadaro nekuzvipira kwazvino kweGoogle neAmazon mundima iyi. Pane chero nhau here? Pane.
Chekutanga pane zvese, izwi raSiri zvachinja. Edza kugadzira iyo chaiyo mubatsiri kurira 'zvakanyanya vanhu', nekukonana kushoma pakati pemuchina uye chaicho, Icho chimwe cheakakosha maficha akaedzwa zvakanakisa gore rimwe nerimwe. Iyo Siri nyowani inotsvedzerera kana ichitaura uye inofambisa kuti kudyidzana muzuva nezuva pamwe nayo hakuna chero zviratidzo zvinowanzoitika zvecomputer pane mubatsiri wega.
Chinhu chakanyanya kukosha pamusoro paSiri mune ino nyowani nyowani, uye kuti isu tichaona zvechokwadi kuwedzeredzwa pamberi pechiitiko chaGunyana. kusangana mukati meiyo system kupindura kune zvimwe zviito. Kunyangwe ivo vasina kuenda zvakanyanya munyaya iyi, vakaratidza kuti kune zvimwe zvakawanda zvinouya kuzokwanisa kuita Siri chishandiso chaicho chekushandisa kwezuva nezuva pasina kukanganisa. Yakanga yave nguva.
Pamusoro pezvo, chimwe chezvinhu zvinonyanya kufadza izvo zvichabatanidzwa mu wizard izvozvi kugona kuita shanduro dzakafanana, chimwe chinhu chakakosha kune nyika iri kuwedzera kudyidzana. Shanduro idzi dzichawanikwa pa Chirungu, Spanish, French neChinese mune yekutanga wave, kunyangwe ichingova nyaya yenguva isati yaenderera mberi nekuwedzera kwayo kune mimwe mitauro.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iOS » iOS 11 » Siri anokura uye anochinja izwi rake muIOS 11